လမ်းဆုံ .....: December 2009
ပျော်ရွှင်ဖွယ် Christmas နေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ..
အေးချမ်းသော အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံစေသော မင်္ဂလာနှစ်သစ် ၂၀၁၀ ဖြစ်ပါစေ ..
ReadMoe “MerrY ChristmaS And HappY NeW YeaR 2010”
Posted by Kaung Khant at 25.12.090comments Links to this post
ReadMoe “Buddha FM”
Posted by Kaung Khant at 23.12.090comments Links to this post
ကိုယ့် ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ် အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်းသုံးနေကျ Website Address တွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေ အသုံးပြုနိုင်အောင် Browser မှာ Bookmarks ဆိုပြီး လုပ်ထားတတ်ကြပါတယ်။
အဲ ဒါပေမယ် .. တခြားနေရာတစ်ခုခု ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မှတ်ထားတာတွေ မမှတ်မိတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါပြီ .. ဒီလို ဒုက္ခကင်းဝေးစေဖို့ . ဘယ်နေရာရောက်ရောက် .. အင်တာနက်အသုံးပြုမယ်ဆိုတိုင်းမှာ Wegsite Address တွေရှာရတဲ့ ပြဿနာကနေ ကင်းဝေးစေဖို့အတွက်
ဒီဆိုဒ်လေးကို သွားပြီး လေ့လာကြည့်ပါဦးနော် .. မြန်မာဘာသာနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ဒီ webisite ထဲမှာပဲ ကိုယ်ရဲ့ Bookmarks တွေ ဖန်တီးထားလို့ရပြီပေါ့နော် ..
ReadMoe “Favoritus Website Bookmarks”
ReadMoe “Website Address”
Posted by Kaung Khant at 22.12.090comments Links to this post
Photo တွေကို Notepad ပေါ်မှာ Text အနေနဲ့ ကြည့်လို့ရအောင် ပြောင်းပေးတဲ့
Webpage ပါ .. လေ့လာကြည့်ပါဦး
သစ်ပင်ငယ်၏အရိပ် ဘလော့ဂ်မှာ တွေ့လို့ ပြန်မျှတာပါ ..
အကယ်၍အဆင်မပြေကြဘူးဆိုရင် Notepad ပေါ်မှာ Font: ကို Lucida Console ကိုပြောင်းလိုက်ပါ .. Fonts Size နည်းနည်း သေးလိုက်ပါ ....
ReadMoe “Photo to Text”
တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Webpage လေးတစ်ခုပါ ..
ဖန်တီးတတ်သူတွေအတွက် .. ဘာမှ မဟုတ်ပေမယ့် .
ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ .. .. ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. အချိန်အားတယ်ဆိုရင်တော့ . ၀င်သာကြည့်လိုက်ပါ
ReadMoe “စိတ်ဝင်စားဖွယ် Webpage”
ကျနော့်ကို ၀ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုလောက် ကြော်ငြာခွင့်ပြုပါ။ ကျနော် လတွေ အကြာကြီးထဲက ပရော့ဂျက်တစ်ခု လုပ်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား (periodic table) ကို မြန်မာ ဘာသာ ပြန်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု လက်ရှိ တွေ့ရှိပြီး ဒြပ်စင် ၁၁၈ မျိုးလုံးရဲ့ ဓါတုဂုဏ်သတ္တိ၊ သမိုင်းတွေနဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဓါတုဗေဒကို စိတ်မ၀င်စားသူတွေ အသုံးမ၀င်ဆိုရင်တောင်မှ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ၊ ဒြပ်စင်တွေရဲ့ ပါတ်ဝငန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေမှုတွေကို ဗဟုသုတ ရယူပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးသားထားတဲ့အတွက် အခြေခံပညာ ကျောင်းသားများအတွက်ပင် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာဘာသာ နှင့် ပညာရေး ၀ဘ်ဆိုဒ်များ များပြားတိုးတက်လာအောင် ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ ကြည့်ရှူ ဝေဖန် အားပေးကြပါဦး ။ ကျနော် က ဒီဇိုင်းနဲ့ manage ပိုင်းလောက်ပဲ ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ဆိုမှုကိုတော့ တစ်ကျောင်းလုံးက ညီအစ်ကိုတွေ အားနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ မကြာမှီ offline သုံး ဆော့ဝဲလ် တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။ ကျနော့်ဘလော့ရဲ့ sidebar အပေါ်ဆုံးမှာ အမြဲတမ်းလင့်ချိတ်ထားပါ့မယ်။ အသိပညာ ရရှိစေမယ့် အကျိုးရှိတဲ့ ၀ဘ် ဖြစ်လို့ ထပ်ဆင့် ပြန့်ပွါး ရင်း ကူညီပေးကြပါ .... အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကိုသံလုံငယ် ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေ ကူးယူဖြန့်ပွားပေးပါသည်။
ReadMoe “ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား (periodic table) website”
ဘလော့ဂ်ဂါ လောကမှာ blogspot.com အစား co.cc ကို လူတိုင်းလိုလို ပြောင်းသုံးနေရပါတယ်။
co.cc ကလည်း ခုချိန်မှ ၁ နှစ်ပဲ Free ပေးသုံးနေတဲ့ အတွက် အားလုံးအတွက် အဆင်မပြေမှုတွေ စတင်လာပြန်တာပေါ့ဗျာ ..
အဲခု လည်း co.nr ဆိုတာက Free ပေးပြန်ပါပြီတဲ့ဗျာ .. အသုံးပြုပုံကို သိချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာသာ သွားကြည့်ပါတော့ဗျာ .. ကိုညီနေမင်း ရေးထားတဲ့ ပို့ပါ ..
ထူးခြားမှုလား .. လွဲချော်မှုလားတော့ သိသေးဘူးဗျာ ကျွန်တော့်ရဲ့ http://www.kkz-ratha.co.cc ကတော့ ၁ နှစ်ကျော်သွားပြီ ခုထိ အဆင်ပြေနေတုန်းပဲဗျ
ReadMoe “Free Domain CO.NR”
Posted by Kaung Khant at 21.12.090comments Links to this post
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကစားနည်းလေးပါ ..
တစ်နည်းအားဖြင့် Mouse ရွေ့တဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက်ထိ တည်ငြိမ်သလဲဆိုတာကို စမ်းတဲ့ကစားနည်းလေးပါပဲ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ပြေလေးကစားကြည့်ရအောင်
အဲ.. တစ်ခုတော့လိုတယ် ကစားတဲ့အခါမှာ Speaker ဖွင့်ပြီး အသံလေးနဲ့ ကစားတာ ပိုကောင်းတယ်ဗျ
ဒီဆိုဒ်လေးမှာ သွားကစားနော် .. http://www.maniacworld.com/maze_game.htm
ReadMoe “Maze Game”
Labels: Game, Webpage
တကယ်ကစားလို့ကောင်းတဲ့ Flash Game တွေပါ .. အပြင်းပြေကစားရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲ တကယ်ကို ပညာတိုးစေတဲ့ ကစားနည်းလေးတွေပါ .. တနည်းအားဖြင့် Physics သဘောတရားတွေနဲ့ ကစားနည်းလေးတွေပေါ့ဗျာ ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သွားပြီး လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦး
ReadMoe “Physics Games”
Posted by Kaung Khant at 20.12.090comments Links to this post
ဒီနေရာကို သွားတွက်ကြည့်ပေရော့ ..
Posted by Kaung Khant at 19.12.090comments Links to this post
ကိုယ့်ရဲ့ Website ကို အလှဆင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် .. တစ်နေရာရာမှာ အသုံးလိုတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်..
စကားလုံးတွေ အနေနဲ့ သုံးတာထက် တစ်ခါတစ်လေ ပုံလေးတွေနဲ့ သုံးတာက ပိုပြီး သိသာမြင်သာစေသလို
International language တစ်ခုအနေနဲ့ လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ် ..
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ .. ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်ပါဗျာ .. စိတ်ကျေနပ်စေမှာပါ
ဒီ Website မှာလည်း icon design တွေ လှတယ်နော်.
ဒီ Website မှာလည်း icon design တွေ လန်းတယ်နော်.
ReadMoe “Icon Archive”
အင်တာနက်မှတဆင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာတွေ .. ထူးဆန်းအံ့သြစရာတွေ .. နည်းပညာရယူစရာတွေ .. ဓါတ်ပုံတွေ .. မူဘီတွေ .. စာသားတွေ .. အကုန်အစုံပါပဲ .. ပြီးတော့ . ပြီးတော့ .....
မြန်မာပြည်နဲ့လည်း ကိုက်ညီတဲ့ Wegsite တစ်ခုပါပဲ .. အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရတဲ့အပြင်
မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့အတွက် အင်တာနက် ကွန်နရှင်နည်းတဲ့အခါမျိုးမှာတောင် သူ့အလိုလို Download လုပ်ထားပေးပါတယ် .. အဲဒီအတွက် ကွန်နရှင်မရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာတောင် အချိန်မရွေးပြန်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ် ..
၀င်ကြည့်လိုက်ပါဦး .. အဆင်ပြေလို့ Install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ..
Labels: Software, Webpage
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ .. ကုမ္မဏီတွေ . သင်တန်းကျောင်းတွေ .. လမ်းတွေ .. ဈေးတွေ . ဆိုင်တွေ .
စတာတွေ .. စတာတွေ .. ရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာသာ ရှာကြည့်ပါတော့
ReadMoe “Myanmar Yellow Pages”
မြန်မာပြည်ရဲ့ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာကို အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်နော် .. ၁၀ ရက်စာ သတင်းတွေကို နေ့စဉ် UpDate လုပ်ပေးနေပါတယ်။
ReadMoe “Myanmar News Paper”
မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါတွေထဲက ထင်ရှားတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေကို စစ်တမ်းကောက်လို့ရထားတဲ့ စာရင်းပါ ..
ဖော်ပြထားတာကတော့ ShweDarling ကပါ
သိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ
ReadMoe “Top 50 Myanmar Blogs”
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကာရာအိုကေ သီချင်းတွေ ဆိုလို့ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် အဆင်ပြေလိုက်မလဲ ..
KTV သွားစရာမလိုဘူး .. ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ် ဆိုလို့ရပြီပေါ့ .. VCD အခွေတွေလည်း စုထားစရာမလိုတော့ဘူး .. သူများတွေ ဆိုထားတာကိုလည်း နားဆင်အားပေးလို့လည်းရသေးတယ်ဗျ .
အဲ .. သဘောကျတယ်ဆိုရင် Down လို့လည်းရသေး ..
ပြောနေကြာပါတယ် .. ၀င်သာကြည့်လိုက်ပေတော့
ReadMoe “Online Karaoke”
Labels: Movie, Webpage
ReadMoe “Search Engine Add Url ..”
Posted by Kaung Khant at 18.12.090comments Links to this post
ကွန်ပျူတာထဲမှာ PhotoShop Install လုပ်မထားသူများအတွက် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့
Online PhotoShop Website လေးပါ..
၀င်ပြီး လေ့လာကြည့်လိုက်ဦးနော် .. Install လုပ်ထားတဲ့ PhotoShop အတိုင်းပါပဲ။။
ReadMoe “Online PhotoShop”
စလောင်းမှာ အမြဲကြည့်နေရတဲ့ Smack Down (RAW) နပန်းပွဲများကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်လို့ရတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ .. WWE Champion
www.wwe.com ပါဗျာ ..
ReadMoe “Smack Down (RAW)”
Posted by Kaung Khant at 17.12.090comments Links to this post
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ မူဘီအစီအစဉ်တွေ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ဆိုဒ်တွေကို တစ်ခါတစ်ခါ ရှာရတာ
မလွယ်ပါဘူး .. အားလုံးကို Free ရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့လေ ..
ဒီနေရာကို သွားကြည့်ပါ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျ .. Free & Full ပေါ့ ..
တကယ်ကို အဆင့်ပြေတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ ..
တစ်ခါတစ်လေတော့ မိနစ် ၇၀ အထိပဲ ပေးတတ်တယ်ဗျာ ..
ReadMoe “Online Movie”
Posted by Kaung Khant at 16.12.090comments Links to this post
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းလေးနဲ့အတူ အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဘာသာပြန်ဆိုပေးမယ့် အွန်လိုင်းအဘိဓာန်ကို တင်လိုက်ပါတယ် ..
ဒီဆိုဒ်ကိုတော့ မောင်ကျော်စွာငြိမ်း ရဲ့ ဘလော့ဂ်ထဲကို မွှေရင်းနှောက်ရင်းကနေ တွေ့တာပါ..
အင်္ဂလိပ်=မြန်မာ ၊ မြန်မာ=အင်္ဂလိပ် ..Portable Dictionary ကိုတော့ ဒီနေရာ ကနေ Download ယူပြီး install လုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ် .. ဒါလေးကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိသူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
ReadMoe “Burmese Dictionary”
Posted by Kaung Khant at 15.12.090comments Links to this post
အားလုံး .. အားလုံးသော ..
သိသင့်သိထိုက် .. ရှိသင့်ရှိထိုက်သော
အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိနေသော .. ဘလော့ဂ်ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ..
အခုမှစပြီး Gtalk ပေါ်မှာ ချက်တင်အတွက် မြန်မာစာကို လေ့လာရင်းရိုက်နေရသော ချက်တင်မိသားစုဝင်တွေ ... အတွက် လေ့လာသင့်သော ..
ကိုလင်းဦး(စိတ်ပညာ)ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ရင်း တွေ့လာတာကို ပြန်တင်ပြပေးတာပါ။
ကနဦးပိုင်းတုန်းကတော့ Link တင်ထားရုံသက်သက်ပါပဲ .. ဒါပေမယ့် သတိမထားမိကြမှာဆိုးလို့
ပိုပြီးလေးနက်အောင် အခုလို ပို့တစ်ခု အနေနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။
တောင်းဆိုချက်။ ။ဒီလို စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းကို Installer Program တစ်ခုအနေနဲ့သာ အသုံးပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရင် .. ရှိနေမယ်ဆိုရင် ... လမ်းညွှန်ပေးကြပါ။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဘာသာပြန် ပရိုဂရမ်တော့ ရထားပြီးပါပြီ။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ အလံအမျိုးမျိုးကို လေ့လာရင်း ဒီလင့်ကလေးတွေ တွေ့မိလို့ အားလုံးအတွက်လည်း တင်လိုက်ပါတယ်
အစောပိုင်း ကျွန်တော်စိတ်ကူးတာက နိုင်ငံအလံတွေကို နိုင်ငံအမည်ပါတွဲပြီး Flash file အနေနဲ့ တင်ဖို့အတွက် အလံတွေလိုက်ရှာရင်း ဒီပုံလေးတွေ တွေ့တာနဲ့ ၊ ပြီးတော့ သဘောလည်းကျတာနဲ့ တင်လိုက်တာပါ..
ကျွန်တော် စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းတော့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ် ..
နည်းပညာလေ့လာရင်း လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းစုလိုက်ဦးမယ် ..
ဒါလေးကတော့ .. နိုင်ငံအမည်ကိုလိုက်ရှာပြီး ပေးထားတဲ့ အလံကို သူ့နိုင်ငံအလိုက် တင်ပေးရပါတယ်..
ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ နေရာတဲ့ အလံကို တွဲပြီးသိစေတဲ့ Game လေးပါပဲ .. ဗဟုသုတတစ်ခုအနေနဲ့ ကစားလို့ကောင်းပါတယ် ..
ဒါကတော့ .. အပေါ်က ကစားနည်းကို သေချာနှံစပ်အောင် ကစားပြီးပြီဆိုရင်တော့ .. သင့်ကိုယ်သင် ကမ္ဘာအနှံရောက်ဖူးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အမည်ကို မှန်အောင် ထည့်ပေးရပါမယ်။
ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာလို့ရတဲ့ ကစားနည်းလေးပါ။
ဒါကတော့ အလံတွေကို Funny ဆန်ဆန် လုပ်ထားတာလေးပါ ..
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ အလံတွေနဲ့ နိုင်ငံအမည်တွေကို တွဲပြီးလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ReadMoe “World Flags Game”
ကိုယ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ အလှဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ ..
လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရမယ့် .. PhotoFunia.com ကိုသာ မြန်းကြွပေတော့ဗျာ..
ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်တော့ မပြောတောဘူးဗျာ .. အဆင်မပြေတာရှိရင်တော့မေးပါ။
ReadMoe “Send Space ကနေဖိုင်တွေ ပို့ကြည့်ရအောင် ..”
Christmas နဲ့ NewYear ရက်တွေ နီးကပ်လို့ လာရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီကို လက်ဆောင်ကဒ်လေးတွေ ပို့ကြတဲ့အခါ အလွယ်တကူ နဲ့ အများသိပြီး ဖြစ်တဲ့ 123Greetings Webpage လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Internet Explorer , Mozilla Firefox ... စသဖြင့် Browser တွေမသုံးပဲ မိမိရဲ့ Computer Desktop ပေါ်ကနေ
Online Radio လိုင်းတွေကို ဖမ်းယူ နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ .. ဒီ iRadio Player ကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ ..
သီချင်းများကို ကူးယူပြီးတော့လည်း ထားနိုင်ပါသေးတယ် ..
ဒီ Player Software ကိုတော့ အဖြူရောင်သံစဉ် ရေဒီယို ကနေ တွေ့ရှိ ကူးယူဖော်ပြပေးတာပါ ။။
ဒီနေရာမှာ iRadio Download လုပ်ပါ။
အဖြူရောင်သံစဉ်ရဲ့ Location URL က .. http://89.238.146.148/APYTZ
မိမိရဲ့ Webpage မှာ ထည့်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကုဒ်လေးသာ ကူးထည့်လိုက်ပါ
<div class="widget-content"><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;" id="jukebox">
<span id="music1"><embed pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" name="MediaPlayer1" controltype="2" autostart="1" showstatusbar="1" src="http://wma2.viastreaming.net/APYTZ" type="application/x-mplayer2" id="music1" showcontrols="1" width="200" height="50"></embed>
</span><div style="text-align: left;">
နောက် အလားတူ online radio တစ်ခုကတော့ .. Just Music Radio ပါတဲ့
သူ့ရဲ့ Location URL: http://wms5.wavestreamer.com/JustMusicRadio ပါ...
အဖြူရောင်သံစဉ်လိုပဲ သူ့ရဲ့လင့်ကိုလည်း ထည့်ထားလို့ရပါတယ် ..
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နားထောင်လို့ရတာပေါ့ဗျာ ...
JustMusicRadio ကို မိမိရဲ့ Webpage မှာ ထည့်ချင်ရင်တော့ ဒီကုဒ်ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်..
သူ့ရဲ့ ပင်မလင့်ကတော့ ဒီနေရာမှာပါ...
<strong><blink><font color="#F2260C">J</font><font color="#EB3813">U</font><font color="#E54B19">S</font><font color="#D86E26">T</font> <font color="#D27F2C">M</font><font color="#CC8F33">U</font><font color="#C59F39">S</font><font color="#BFAD3F">I</font><font color="#B8BB46">C</font> <font color="#B2C74C">R</font><font color="#ACD352">A</font><font color="#9FE65F">D</font><font color="#99ED66">I</font><font color="#92F36C">O</font></blink></strong>
<center><a href="http://www.justmusicradio.net/radio/"></a> <embed width="300" src="http://wms5.wavestreamer.com/JustMusicRadio" autostart="1" wmode="opaque" height="60"></embed></center>
ဒါကတော့ Dream Wave ရဲ့ Link တွေပါ .. အဆင်ပြေရာကို ထည့်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်
အဖြူရောင်သံစဉ် နှင့် Justmusicradio တို့ကို အထူးတောင်းပန်ချင်တာကတော့ ..
ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ လင့်တွေ တင်ပေးတဲ့အတွက် .. အဆင်မပြေမှုများရှိရင် ကျွန်တော့ဆီတိုက်ရိုက်ပြောပေးပါ..
ReadMoe “iRadio , Online Radio Player”
2012 မှာ ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးတော့မယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ နေရာတော်တော်များများမှာ ပျံနှံနေကြပါပြီ ..
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ .. အီးမေးထဲမှာ .. ရပ်ကွက်ထဲမှာ .. ဟိုမှာ .. ဒီမှာ ..
ဗေဒင်ဆရာတွေကတောင် ပြောနေကြပြီ ...
ဟုတ်တယ်လို့ ပြောသူကတစ်ဖက် .. တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး သက်သေပြသူကပြ ...
မဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းသူကငြင်း .. စိတ်ကူးယဉ်တွေ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသူကဆို ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဒီဇာတ်ကားကတော့ ကြည့်လို့ကောင်းတာ တကယ်ပဲ ..
သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြည့်လိုက်ဦးနော် ....
ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ .. ပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ.
ReadMoe “2012 မှာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးတော့မယ်”
Posted by Kaung Khant at 14.12.090comments Links to this post
Knowledge is Free ဘလော့ဂ်ဆိုဒ်ထဲမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
ပရိုဂရမ်းမင်း (Programming) ဘာသာရပ်ကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Online ပေါ်က ရင်းမြစ် (resources) တွေကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုဆိုတာ လေ့လာလေ နက်နဲလေ၊ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေပါပဲ။ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်စွာသိချင်ရင် Online မှာ Programming နဲ့ coding တွေအတွက် ရှာနိုင်တဲ့နေရာတွေ အများကြီးပါ။
Sun Microsystem ရဲ့ Java 'Trail' ကတော့ တကယ်ကောင်းတဲ့ site လို့ ပြောရမယ်။ Java ကို လေ့လာတုန်းက နားမလည်တာတွေ အားလုံး၊ ပြဿနာတွေအားလုံးကို ဒီ site ကနေ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့ ညွှန်းကြပါတယ်။ 'Trail' site က လက်ဦးအစသမားတွေအတွက် အတော်လေးလုံလောက်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဒီ လိုင်းမှာ objects, classes, inheritances, interface နဲ့ packages တွေ အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံကစ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေကို concept အနေနဲ့ အများကြီး ရနိုင်တယ်။ အဆင့်မြင့်ကြီးတွေ မပြောသေးဘဲ အဆင့်လိုက်အသေးစိတ်ကို လေ့လာနိုင်တယ်။ နားလည်လွယ်တဲ့ ဥပမာတွေ အများကြီး ထည့်ပြီးရှင်းပြထားပါသေးတယ်။
Java Beans ကတော့ Tutorial တွေလုပ်ဖို့ တကယ့်စာကြည့်တိုက်ကြီး တစ်တိုက်လို့ ပြောရမယ်။ Java Programmer တွေအတွက်သာမက C++ နဲ့ PHP သမားတွေအတွက်ပါ အများကြီး ပတ်သက်နေတဲ့ နေရာလို့ ပြောရမယ်။ Java Beans မှာ Java ပရိုဂရမ်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း သူတို့ content တွေနဲ့ အများကြီး အထောက် အကူ ပြုထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေက သူတို့တွေ့ထားတဲ့၊ သိထားတဲ့ ပရိုဂရမ် tutorial တွေကိုလည်း တင်ထားပေးပါတယ်။
ဒီ website မှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ assignment တွေ အများကြီး သွားတွေ့လိုက်ရတယ်။ Java Lessons က tutorial တွေ များစွာ ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဥပမာတွေပေးပြီးတော့ပဲ focus လုပ်ထားတယ်။ ဒီ site မှာ mechanics of the language နဲ့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ statement တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ဖော်ပြထားတယ်။ ပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှင်းလင်းချက်အဖုံဖုံနဲ့ စာကြည့်တိုက်တစ်တိုက်စာလောက် ရှင်းလင်းချက်တွေကို တွေ့နိုင်တယ်။ ဥပမာ တစ်ခုကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ 'lesson viewer' ကို တွေ့နိုင်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ source code တွေကို နောက်ထပ် window တစ်ခုနဲ့ ဖတ်နိုင်မှာပါ။ လိုင်းတစ်လိုင်းစီရဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေကို သိချင်ရင် အခြား window တစ်ခုနဲ့ ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Code လိုင်းတွေပေါ်က cursor ကို ဖယ်လိုက်တာနဲ့ viewer က ဆက်စပ်နေတဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေကို highlight နဲ့ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ ဒီ website ဟာ သိပ်ပြီး တော့ ထူးခြားမှုမရှိပေမယ့် အသုံးကျမှုကတော့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ကို မရနိုင်ပါဘူး။
Java World Community
Java World ရဲ့ main page မှာတင် တကယ်ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ တင်ထားတာတွေ့ရမယ်။ ဒီဆောင်းပါး တွေဟာ programming နဲ့ပတ်သက်ပြီး နားလည်စေနိုင်ရုံမျှမက ချဲ့တွေးမယ်ဆိုရင် အများကြီး တွေးလို့ရတယ့် ဆောင်းပါးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Java World မှာ community section ဆိုတာပါတယ်။ ဒီ ကဏ္ဍကနေ Java နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Q&A forum တွေအပြင် အခြားသက်ဆိုင်ရာ blog တွေဆီကိုလည်း သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီ site ဟာ Java Coffee Break ရဲ့ Library of tutorial က အတော်လေးဟောင်းနေပြီလို့ ဆိုရမယ်။ ဒီ site မှာ ရေးတဲ့သူတွေက ၁၉၉၆ လောက်ကတည်းကလေ။ ဒါပေမယ့် တကယ့် language နဲ့ပတ်သက်ပြီး နှိုက်လိုတဲ့ နောက်ပေါက်တွေ အတွက်ကတော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေရာကြီး တစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဘာတွေ သိချင်လိုချင်တယ် ဆိုတာကို ဒီ site မှာ ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Visual C++ Developer Centre
C++ ရဲ့ တရားဝင် website တစ်ခုပါ။ ဒီဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်တာမှန်သမျှ အားလုံးအဖြေတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမျိုးပေါ့။ Microsoft Developer Network က download နဲ့ tutorial တွေ အများကြီး ဖြည့်ဆည်းပေးထား တယ်။ C++ ကို စတင်လေ့လာချင်သူတွေ၊ စိတ်ပါဝင်စားပြီး ကိုယ်ပိုင်လေ့လာချင်သူတွေအတွက် အထောက် အကူပြုမယ့် site လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
CProgramming.com ဟာ တကယ့်အံ့ချီးဖွယ် tutorial library ကြီးလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ C ရော C++ အတွက်ပါ အခြေခံကစပြီး ရှင်းပြနိုင်တဲ့လိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ OpenGL လို ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ လေ့လာစရာတွေ အများ ကြီးပါ။ CProgramming ရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ update သိပ်မလုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ညွှန်းလိုတာကတော့ C++ နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီ site မှာ အပြည့်စုံဆုံး ရနိုင်တယ် ဆိုတာပဲ။
Usenet group က C++ နဲ့ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ site လို့ ပြောရမယ်။ ဒီ site မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာ သော ထောက်ပံ့သူတွေရှိတယ်။ မေးခွန်းလေးတွေ ပြန်ဖြေတာတောင် အသေးစိတ် ဖြေပေးထားတယ်။ ၁၉၈၆ နိုဝင်ဘာလလောက်ကတည်းက ထောင်ပေါင်းများစွာသော post တွေကိုလည်း ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။ C++ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်လေးလည်း အတွေ့အကြုံဗဟုသုတ ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီအဖွဲ့ကြီး ဆက်လက်တည်တံ့နေတာ ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ထိုက်တယ်။ ဒီအထဲမှာ မေးချက်၊ ဖြေချက်၊ ဆွေးနွေးချက်တွေဟာ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ ကြည့်ကြည့်၊ အဖွဲ့လိုက်အနေနဲ့ ကြည့်ကြည့် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာ ရတနာသိုက်ကြီးပမာ ယနေ့တိုင် ဖြစ်နေဆဲလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
အခြေခံကျကျ tutorial တွေနဲ့ website တစ်ခုပေါ့။ ဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူတွေ အတွက် ရည်စူးပြီး သီးသန့်ပညာရှင်ဆန်တဲ့ website လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ site ဟာ တကယ့်ဈေးကွက်ဝင် ပညာရှင် အဆင့်ဆင့်လောက်အထိကို ရည်စူးပြီး သုတေသန လုပ်ထားတာတွေ တင်ထားတာကြောင့် ခုမှစတင် လေ့လာသူတွေအနေနဲ့တော့ အသက်ရှုမှားလောက်တဲ့ site လို့ ဆိုရမယ်။
ဒီ site မှာလည်း tutorial တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အမှန်တော့ ဒီ site မှာ ရောင်းနေတာတွေက လက်ရှိ active ဖြစ်နေတဲ့ forum တွေနဲ့ ဥပမာကောင်းကောင်းတွေ စုစည်းချက်တွေပါ။ ဒါတွေကို အလကား မရပါဘူး။ အဲဒီ ခက်ခဲ နက်နဲတဲ့ source code တွေကို download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Compiled လုပ်တာတွေ၊ run တာတွေကို အခြား DOS သို့မဟုတ် Windows နဲ့ လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Visual Basic Developer Centre
Microsoft ရဲ့ တစ်ကျော့ပြန် ထိပ်တန်းကျတဲ့ website တစ်ခုလို့ ပြောရမယ်။ Microsoft ရဲ့ ဒီ Visual Basic website ဟာ C++ page တွေကိုလည်း ထည့်ပေးထားတယ်။ Tutorial အမျိုးမျိုးကိုလည်း download လုပ်ယူ နိုင်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Video Tutorial တွေပါ download လုပ်နိုင်တာပါ။ Microsoft Developer Network ရဲ့ C++ page နဲ့ Sun Microsystem က Java trial တွေကိုလည်း ဒီ site မှာ လေ့လာ နိုင်တာက ပိုပြီး အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပေါက် ပရိုဂရမ်မာအသစ်တွေအနေနဲ့ ဒီ site က video သရုပ် ပြသင်ကြားချက်တွေဟာ လွန်စွာကောင်းလောက်အောင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Mark-up and Scripting Languages
PHP coding တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး tutorial တွေအပြင် တကယ့်ပြောင်မြောက်တဲ့ active forum တွေကိုပါ လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
HTML:An Interactive Tutorial
အခြေခံကျကျ tutorial ကောင်းကောင်းတွေ ထည့်ထားတယ်။ HTML ကို စတင်လေ့လာချင်သူတွေအတွက် ကောင်းတယ်။ Coding တွေအပြင် website design တွေကိုပါ အခြေခံကစပြီး လေ့လာနိုင်တယ်။
SQL နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိဒါန်းပျိုးပေးထားတဲ့ site လို့ဆိုနိုင်တယ်။ တကယ့် interactive ဖြစ်တဲ့ ဥပမာတွေ ပေးထားတာက လေ့လာချင်သူတွေအတွက် အထောက်အကူများစွာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
HTML, CSS နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံကျကျ tutorial တွေ ထည့်ပေးထားတယ်။ Tutorial တွေကတော့ လက်ခံ ချင်လည်း လက်ခံလို့ရသလို လက်မခံချင်ရင်လည်း ရတဲ့ ဉာဏ်ပွားပြီးစဉ်းစားစရာ ပြဿနာတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို အခြေခံကျကျ စဉ်းစားပေးထားတယ်။ သူတို့နဲ့ W3School site က tutorial တွေဟာ သိပ် မနီးစပ်တာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေစွာ လေ့ကျင့်နိုင်မယ့် နေရာကောင်းတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အရိုးဆုံးအမည်နဲ့ အရှင်းဆုံး website လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ Python Tutorial များကို အခြေခံကစပြီး တွေးရင် တွေးသလောက် ခရီးရောက်တဲ့ language လို့ ဆိုချင်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ programming ကို တည်ဆောက်ချင်သူတွေအနေနဲ့ဖြစ်စေ၊ လွယ်လွယ်နဲ့စပြီး အကောင်းဆုံးရလဒ်ကို ရယူဖန်တီးချင်သူတွေ အတွက်ဖြစ်စေ၊ ဒီ site ကတော့ အမှတ်ပြည့်ပေးရမယ့် site လို့ ဆိုချင်တယ်။
Python tutorial တွေ အများကြီးပေးထားပြီး နောက်ထပ် အသစ်တွေကို ဆွဲခေါ်ထားတဲ့ site လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒီ site ဟာ ကလေးတွေအတွက်ရည်စူးပြီး ကလေးပရိုဂရမ်မာတွေ ထွက်ပေါ်ရေးများ လုပ်ထားသလားလို့ ထင်ရတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ ပရိုဂရမ်ကို လေ့လာချင်ရင် ၀င်ကြည့်ပေါ့။
Source: Personal Computer Magazine (No.29, September 2009)
Written by AM2
Programming Resources by Chris Taylor
လိုရမယ်ရ သွားရင်းလာရင်းတွေ့မိလို့ အသုံးလိုမယ့်သူများအတွက်
Program Download တွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ReadMoe “Programmer အကြိုက် Online ရတနာသိုက်”
ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ့ ၂၀၁၀ ရာသီခွင် ဟောစာတမ်း စာအုပ်များ
ဒီနေရာမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ် ..
မြန်မာဗွီစီဒီ .. မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်လမ်း .. မြန်မာစာတမ်းထိုး ဇာတ်လမ်းများလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ShweOo.com ပါတဲ့ဗျာ ..
ReadMoe “ShweOo.com မှာ ဗေဒင်ဖတ်ပြီး မူဘီကြည့်ရမယ်”
Notepad ဖိုင်ဖြင့် Programmer အသုံးပြုလိုသူများ .. Wepage ရေးသူများ .. Html Code များကို Edit လုပ်လိုသူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် Notepad တစ်ခု တွေ့ထားပါတယ်
အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ .. ဒီနေရာကနေ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ReadMoe “Programmer's Notepad”
Address Bar တွင် http://ifile.it/ ရိုက်ပါ။
iFile.it ကနေ ဖိုင်များကို Free User အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရသလို၊ Account ဖွင့်လိုသူများ အနေနဲ့ create an account ကို နှိပ်ပါ။
Username .. Password .. Email တို့ကိုဖြည့်ပါ .. ပေးထားသော စာတန်းကို မှန်အောင်ပြန်ရိုက်ပေးပါ။
Continue ကို နှိပ်ပါ။
account successfully ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Login ၀င်ပါ။
username ,, password ဖြည့်ပါ .. continue ကို နှိပ်ပါ
Upload စတင်လုပ်လိုပါက select fiels ကိုရွေးပါ .. မိမိတင်လိုသော ဖိုင်ကိုရွေးပါ။
free user များအနေနဲ့ အစပိုင်း Main page မှာကတည်းက select files ရွေးပြီး တင်လို့ရပါတယ်။
Upload files ကိုနှိပ်ပါ။
Loading Time စောင့်ပေးပါ .. File size အပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်အနည်းငယ် စောင့်ပေးပါ။
အကယ်၍ Upload Cancle လုပ်လိုက. calcle all uploads ကို နှိပ်နိုင်ပါသည်။
Upload Success ဖြစ်ပြီဆို အခုလို URL Link ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီထဲက Link ကို ရွေးပြီး
Download Link အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။။
Free User များအနေနဲ့ ဒီအထိပဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်...
Account ဖွင့်ထားသူများအတွက်ကတော့ ..
Browse ကိုသွားပါ .. မိမိ Upload တင်ထားသော ဖိုင်များကို တွေ့ရပါမယ်။
ဖိုင်ပေါ်မှာ Click နှိပ်ပြီး Download အဖြစ်သုံးလို့ရသလို .. တခြားသူများကို Download Link
ပေးချင်တယ်ဆိုပါက . Files Name ပေါ်တွင် Mouse Pointer ကို တင်လိုက်ပါ..
Window ရဲ့ အောက်ခြေ Start Button နားက Clickboard ပေါ်တွင် Download Link ကို ပြထားပေးပါတယ်။ အဲဒါကို ကူးယူပြီး Download Link အဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ်။
ReadMoe “iFile.it တွင် File Upload လုပ်ခြင်း”